China Yakasarudzika GCK (L) Yakadzika Voltage Dhirowa switchgear Fekitori Mutengo-shengte vagadziri uye vanotengesa | Shengte
Yakasarudzika GCK (L) Yakadzika Voltage Dhirowa switchgear Fekitori Mutengo-shengte
GCK (L) yakaderera-voltage dhizaini switchgear inoumbwa nesimba rekuparadzira nzvimbo (PC) kabati uye mota yekudzivirira nzvimbo (MCC).
Iyo inokodzera kune vashandisi vemasimba senge magetsi emagetsi, zvinotsiviwa, maindasitiri uye emigodhi emakambani se AC 50Hz, yakanyanya kushanda voltage kusvika ku660V, yakanyanya kushanda ikozvino kusvika ku350A yekuparadzira system, sekuparadzira magetsi, mota kudzora uye magetsi ekuparadzira michina simba kutendeuka. Kugovera uye kutonga.
Iyo kabhodhi furemu yakasungwa nesimbi yakasarudzika-ine simba rakanaka uye kuomarara.
Iyo rack uye zvikamu zvinokwira maburi zvinogadzirwa maererano ne20mm modulus.
Zvikamu zvemukati zvemukati zvakakosheswa, uye zvikamu zvekunze (racks nemakiwo emikova) zvakapetwa nekusaswa nemagetsi epoxy powder.
Maumbirwo ePc feeder kabhodhi akafanana neanopa feeder kabati. Kana iyo feeder yazvino iri 630 A ~ 2000A, kabhineti yega yega inogona kuve yakagadzirirwa zvishwe zviviri uye yakaiswa kumusoro uye pasi.
Pakati pesimba (PC) kabhineti, chikamu chepamusoro inzvimbo yakatwasuka yebhazi, uye chikamu chepazasi ndiyo imba yekutenderera yedunhu. Dunhu mudariki inogona akashongedzerwa pamwe nyika INE dzakatevedzana, CW1 akatevedzana uye zvichingodaro. Inogona zvakare kuve yakashongedzwa nemhando dzese dzedunhu mabhureki akagadzirwa kunze kwenyika, senge iwo anogadzirwa neABB Kambani, zvinoenderana nemakasitoma'needs.E akateedzana, M akateedzana wedunhu mabhureki anogadzirwa naSchneider, uye vakangwara wedunhu mabreak.
Bhazi system: Bhazi remutumbi we cabinet rinotora matatu-chikamu shanu-tambo sisitimu, bhazi rimwe chete parinotaridzwa yazvino yebhanga rakatwasuka iri 1250 A kana zvishoma, mbiri bhazi kana yakayerwa yazvino yemvura bhazi iri pamusoro pe1250 A, yakatwasuka bhazi pakati pekabhineti uye kabati inovakwa nekubatanidza mabhuru, yakamira bhazi yakavharwa neakakurudzira ndiro uye yakajeka plexiglass ndiro, uye zvemukati baffle inoshandiswa kudzikamisa arc kupararira. Bhazi risingarerekeri rakaiswa kumberi kwedenga remakurukota, uye bhazi rinodzivirira (PE) rakaiswa pazasi pekabhineti, iro rakabatana nebhodhi rekuparadzanisa uye musuwo wemuviri wedare, nekudaro kuve nekuenderera mberi kwevhu.
Iyo kabati uye mudhirowa kabhineti eakagadziriswa zvirongwa senge capacitance muripo uye metering zvine zvakafanana chitarisiko chimiro uye yakaenzana yakatwasuka bhazi chinzvimbo, nekudaro kuve nechokwadi chekuti mudhirowa kabhodhi uye yakagadzika kabhineti inogona kushandiswa parutivi.
Iko kune echisikigo emhepo yekupisa windows pazasi uye kumusoro kweswichi kabhineti pasina kudzikisira iyo yekudzivirira nhanho yegobvu.
Chikamu chekudzivirira chekabhokisi rekabhodhi IP4.
Rated uchishandisa maitikiro (Hz) 50
Rated uchishandisa voltage (V) 380
Rated kuputira voltage (V) 660
Kunonyanyisa yavose sezvavakatarirwa uchishandisa yazvino (A) Horizontal bhazi bhawa 630-4000
Vertical bhazi bhawa 1600
Maximum yakatarwa ipfupi-yenguva kutsungirira yazvino Horizontal bhazi bhawa 80kA, Unobudirira kukosha） / 1 s
Vertical bhazi bhawa 50kA, Unobudirira kukosha） / 1 s
Kunonyanyisa yavose sezvavakatarirwa yepamusoro kutsungirira ano Horizontal bhazi bhawa 170kA
Vertical bhazi bhawa 110 kA
Main Dunhu Plug-in (A) 200/400/630
Yekubatsira Dunhu Rinobatanidza (A) 10
Simba Frequency 1 Minute (A) 2500
Kunonyanyisa chinzvimbo chekudzora mota (kW) 155
Chikamu chekudzivirira IP30 ~ IP40
Mashandiro maitiro Yemunharaunda, kure, otomatiki
Pashure: Wholesale Mutengo weHXGN-12 AC Yakakwira Voltage switchgear Yakagadziriswa Metal Yakavharwa Loop switchgear-shengte
Zvadaro: Fekitori Mutengo GGD AC Yakaderera Voltage Distribution Kabineti Mutengesi-shengte